Ducada shafeeco ee loogu talagalay lamaanaha dhibaatada ku jira | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Salaadda Salaada shafeeca ah ee loogu talagalay lamaanaha dhibaatada ku jira
Salaada shafeeca ah ee loogu talagalay lamaanaha dhibaatada ku jira
Maanta waxaan eegi doonaa salaadda duco ee loogu talagalay lamaanaha dhibaatada ku jira. Guurka waa bilowga, qoyska, waana ballanqaad nololeed oo dhan. Waxay kaloo ku siisaa fursad aad ku korto isku filnaansho la'aan markii aad u adeegtid qoyskaaga. Guurku wuxuu ka badan yahay midowga jirka; sidoo kale waa midnimo nafsi iyo mid shucuureed. Midowgu wuxuu muujiyaa midka u dhexeeya Ilaah iyo Kaniisadiisa.
Si naxariis leh Kusoo Dhaawac Channelkeena YouTube Si Aad U Daawato Fiidiyowyo Duco Qiso Cajiib Ah Maalin kasta
Tani waxay la yaab ku noqon kartaa dadka qaarkood, laakiin haa, xitaa guurka Masiixiyiinta ah halganka, Haddii aad Masiixi tahay oo aad weligaa dareentay niyad jab, jahwareer, ama xitaa xanaaqaaga xaaskaaga, kaligaa ma tihid. Waxaa laga yaabaa inaadan garanaynin waxaad sameyso ama halka aad u leexatid. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa inay caadi tahay in lammaanaha Masiixiyiinta ah ay la dagaallamaan. Intaa waxaa sii dheer, kuwa ballan qaada “ilaa dhimashadu annaga qayb ha lahaato” way burburi karaan dhammaantood.
Masiixiyiintu qumman maahan, ama si lama filaan ah uma noqdaan khabiiro xiriir markay Masiixa raacaan. Markaa hadaad ku jirtid guur adag, uma baahnid inaad is dhiibto ama aad dareento inaad kaligaa tahay. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad tixgelisaa qaar ka mid ah sababaha guurkaaga u dhibtoodo. Halkan waxaa ah waxyaabo dhowr ah oo dumin kara guri. Caqabadaha Isgaarsiinta, La'aanta nuglaanta, isla weyni, isku-filnaansho la'aan, Maalgashi la'aan, Filo xaaskaaga inuu is beddelo.
Guurkaada ma dhici doono maxaa yeelay waxaad is dhaawacaan midba midka kale, waxaad dhibaato ku qabtaa xiriirka, ama waxaad ku khilaafsan tahay arrimo muhiim ah. Labada qof ee isqaba waxay la kulmayeen oo ay xallinayeen dhibaatooyin kaligood, iyadoo laga bilaabayo Aadan iyo Xaawo ilaa iyo maanta. Markay sii badato waayo-aragnimada iyo qaan-gaarnimada labada qof ay yeeshaan guur, ayaa guusha ugu badan ee lagu gaaraa maaraynta iyo xallinta dhibaatooyinka. Iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah, Ilaah wuxuu ku nool yahay guurka labo Masiixi ah wuxuuna siiyaa awood ay ku maareyn karaan cilaaqaadka caafimaad iyo caafimaad ahaanba si guul leh
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa war ah; Ilaahay wuxuu balan qaaday inuu guursan doono guurkayaga. Waxaa laga yaabaa inaad la dhibtooneyso guryaha burburay; Tani waxay noqon kartaa mucjiso aad ubaahantahay inaad gurigaaga ka dhigto aag raaxo leh. Waxaan kuu soo ururiyey xoogaa duco shafeeco ah oo ku saabsan lamaanaha dhibkaysan ee maanta adiga idiin ah. Salaaddan ducada ahi waxay xoojin doontaa guurkaaga inuu midho dhalo dhinacyada oo dhan. Sidaad salaadiintan maanta ugu qaybqaadatid, waxaan arkaa jiritaanka Ilaah oo xakameynaya guurkaaga waxaanan arkaa camal kasta oo mugdi ah inuu si xun u saameynayo guurkaaga oo lagu burburiyo magaca Ciise Masiix. Waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad salaada oo dhan qalbigaaga ku tukato caawa. Guurkaagu waa inuu ku shaqeeyaa magaca Ciise Masiix.
Rabbi Ciise, waxaan kaa baryayaa inaad ku faani karto guurkayga. Meel kasta oo aan ka helo nafteyda, waqtiyo wanaagsan ama waqtiyo xun, iga caawi inaan ka fikiro dabeecaddaada. Iimaan ahaan, waxaan sugaa isbedel iyo bogsiis guurkayga.
Sayidow waxaan kuugu duceeyaa inaad nabadu hesho si aad si hagaagsan ugu xukuntid guurkayga iyo gurigayga. Waxaad eraygaagii ku sheegtay in nabadda aad siiso uu dhaafo waxgarashada oo dhan. Waxaan helaa nabaddaas hadda. Waxaan doortay inaan nabada Masiixa kudeysto qalbigayga. Sida nabada Masiixu qalbigayga ugu jirto, waxay kusii fidi doontaa guurkayga.
Sayidow, na tus sida aan u dayacanno tusaalahaaga oo aan uga leexanno isku-ekaanshaheena iyo kibirkeenna iyo is-hoosaysiinta midkeenba midka kale u adeegto, oo isku hal fikir iyo isku fikir ah oo midba midka kale u qiimeeya oo u fiirsada danahooga midka kale
Ilaahow guurkayaga ku barakee nabad iyo farxad, oo jacaylkeena midho dhal u noqo ammaantaada iyo farxaddayada labadaba halkan iyo weligeedba.
Rabbi Ciise, waxaan kaa codsaneynaa isku xirnaan adag oo midnimada ku jira axdigayaga oo yaan waxba inaga dhex dhicin.
Aabe, Na sii xooggayaga aan ku jimicsanno meelaha nolosheena aan ku baahnayn. Na sii diiradda iyo dulqaadka aan ku socodsiinno.
Magaca Ciise, waxaan ku dhalleeceeyaa fikir kasta oo nacayb, xumaan iyo kibir midba midka kale midka kale. Waan canaantaa muran kasta, xaalad kasta, iyo dood kasta oo ka jirta gurigayaga maanta,
Sayidow, na bar, oo na tusa inaan had iyo goor kugu doondoonno wax kasta oo aan u samayno. Jacaylkeennu ha ka buuxsado kalgacayl run ah, oo aynu isjeclaanno had iyo goorba.
Sayidow, u oggolow ilmada dhibta ku haysa guurkayga ee loo beddelo ilmada farxadda. Waxaanse Ilaah ka baryayaa inaad igu ammaantaa gurigayga inta dabayshu socoto.
Gacmo kasta iyo shar kasta oo shar ah, oo lagu kiciyay inay dhib u keenaan nabadeyda iyo qoyskeyga, curyayaan oo dhintaan, magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, hel oo baabi'iya awoodda xun iyo hubkoodaba oo ay ka kireeyeen qoyskayga, magaca Ciise.
Sayidow, waxaan jeclahay cadhada iyo qadhaadhka reerkayga ee ku cago jiifa cagahaaga, waxaanan ku baryayaa in nimcadaada, aad u kashifto wax kasta oo sunta qadhaadhka ah ee ku jira qalbigeenna dusha sare, oo reerkayga ka xoreeya. Waan ka baryayaa
Laakiin Sayidow, waxaan jeclaan lahaa in reerkaygu ka fogeeyo wasakh kasta oo qalbigeenna ku jirta, in xididka xanaaqa uu ku dhex foororsado gudaha. Waxaan kaa baryayaa inaad tijaabiso oo tirtir wax alla waxa hortaada ku qumman.
Mahadsanid, Sayidow. Qoyskeygu waxay kugu kalsoon yihiin inaad meesha ka qaadid cadhada oo dhan oo aad naga buuxisid nabadgalyadaada qumman, waayo waxaad balan qaaday inaad ku ilaashanayso nabad buuxda oo maankaagu ku hayo adiga.
Ilaahayow, waxaan kaa baryayaa inaad ka bogsato dhibaatada ka soo gaadhay halganka dheer ee ay wadaageen aniga iyo xiriirkeenna. Fadlan fadlan labadiinaba noogu barakee xikmadda si aan u qaadanno cilmiga wixii aan ku qaldamay oo aan u adeegsanno sidii aan wax uga sii fiicnaan lahayn.
Sayidow, jacaylku ha nagu filnaado xiriirkeenna. Wuxuu ka buuxaa dhinac kasta oo nolosheena ah, isagoo bogsanaya khilaafka noo dhexeeya. Ka caawi aniga iyo lammaanahayaaba inaan is jeclaano sida Masiixu u jecel yahay kaniisadda, sida aad u jeceshahay carruurtaada aadanaha: oo shuruud la’aan iyo xushmad leh.
Aabaha jannada, Fadlan iftiinkaaga u iftiimi qoyskayga. Nasiin awood aan kaga gudubno dhibaatooyinka oo dhan ee aan la tacaalno hadda oo naga ilaali wixii dhibaato ah ee aan la kulano mustaqbalka.
Sayidow, fadlan na soo kaxee, sidii loogu talagalay. Waxaan jeclaan lahaa jacaylka ina xidha oo sii xoogaysanaya sidii aan u fulin lahayn himilada aad noo dhigtay.
Sii qoyskayga cafis wixii dambi ah ee aan galnay. Sayidow, aan midkeenba midka kale cafiyo, Sayidow, mar marka qaarkood way adag tahay in la sameeyo.
Sayidow, waad ku mahadsan tahay, salaadda jawaabta, magaca Ciise ayaan ku barinnay. Aamiin.
article PreviousSalaad Awood leh ee Badbaadinta Shaqada
Next articleDUGSIYADA KU SAABSAN XIDHIIDHKA DHAQANKA
Sida Loogu Tukado Salaada Waxtarka Mucjisooyinka
Bixinta Subaxa: Waa qaali
50 Salaad Habeen Oo Lagaga Soo Horjeedo Dib U Dhaca Guurka
40 Qodobbada Salaadda Si Looga Baxo Riyooyin Xun